လူမှုရေး၏အနာဂတ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အနာဂတ်ဖြစ်သည် Martech Zone
ငါမကြာသေးမီကတက်ရောက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ် ExactTarget ဆက်သွယ်မှုများ 2012, နှင့်အတော်ကြာ panel ကိုဆွေးနွေးမှုများအကြား, ငါအထူးသဖြင့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပျော်မွေ့ခဲ့သည် လူမှုရေး 2020: ငါတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ExactTarget ရှိ VP စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသုတေသနနှင့်ပညာရေးကအတိအကျမသိရသေးသော Jeff Rohrs ၏သုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ExactTarget မှ Social VP Margaret Francis၊ David berkowitz, 360i မှာထွန်းသစ်စမီဒီယာ၏ VP, စတီဖင် Tarleton, Global Channel & SMB Marketing Bazaarvoice ၏ဒါရိုက်တာနှင့်စီအီးအိုနှင့်တည်ထောင်သူ Sam Decker တို့ဖြစ်သည် Mass ဆီလျော်မှု.
ဒီအဖွဲ့မှာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အတွေးအချို့၊ စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အနာဂတ်အတွက်မည်သို့မြင်မည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးများရှိသည်။ ၎င်းသည်အဆုံးတွင်လာမည့်လိုင်းတစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်လာမည့်အပိုဒ်အနည်းငယ်သည်ရှုထောင့်အချို့ကိုကူညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘိုးဘေးများသည်သားကောင်များဖြစ်ကြောင်းတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်သမားများမေ့လျော့လေ့ရှိသည်။ သူတို့ဖောက်သည်များ၏ပြိုင်ဘက်များကိုဈေးကွက်မှဖယ်ထုတ်ရုံထက်မကလိုသည်။ သူတို့ကိုလှံများ၊ ဓားများနှင့် tomahawks များဖြင့်လိုက်ရှာနိုင်ပါကသူတို့ရရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်တိုးတက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်မှန်ကန်သောသတင်းစကား၊ မှန်ကန်သောလူ၊ အချိန်ကာလကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်တိုးတက်မှုနှေးကွေးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနားလည်ကြသည်။ ထိုအတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ဖိုးရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအားဖြင့်စားသုံးသူကိုမျက်နှာသာပေးနေသည်ဟုပြောခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်ကိုတရားမျှတစေသည်။ ပြီးနောက်မှာကျွန်ုပ်တို့မှာလုပ်စရာအလုပ်ရှိတယ်။
ဒါပေမယ့်ရင်ဆိုင်ကြရအောင်။ ဘီစီ 2,000 ခုနှစ်တွင်ရည်မှန်းချက်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များစျေးကွက်လွှမ်းမိုးနိုင်ရန်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါ။ ပြီးတော့အဲဒါ နေဆဲ.
လူမှုရေးအရာခပ်သိမ်း၏အသက်အရွယ်မှအစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်။ လူမှုရေးနည်းပညာများသည်အမေရိကကိုကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများတွင်ဖမ်းစားခဲ့သည်။ ရုတ်တရက်အသားစားအတန်ငယ်အားနည်းချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအဖြစ်မှန်အသစ်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအများစုကိုဆိုးဆိုးရွားရွားပြုမူခဲ့ပါတယ်။ တင်ထားသောမေးခွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီမည်မျှယနေ့အထိလုံလောက်စွာတုံ့ပြန်နေကြသနည်း တွစ်တာ?
ဒါကိုမမှားပါနဲ့ လူမှုရေးကမလာရင်စီးပွားရေးလောကကသူတို့ရဲ့အပြုအမူကိုပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး။ အကယ်၍ ကော်ပိုရေးရှင်းများသည်ဖောက်သည်များကိုအာရုံစိုက်ရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ပါက၎င်းတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းများဖန်တီးလိမ့်မည်မဟုတ်လော။ ငါတို့နေဆဲဒီရန်ပွဲသို့မဟုတ်ပျံသန်းကမ္ဘာတွင်နေထိုင်နေကြရသည်, ကုမ္ပဏီများသည်ဤလူမှုရေးအဖြစ်မှန်အသစ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်၊
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှလူအများအပြားသည်လူမှုရေးအရ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုခံယူချက်မထားသည့်ခြင်္သေ့ကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်သစ်ပင်တစ်ပင်နှင့်ချိတ်ထားသောသိုးကိုငါးစာအဖြစ်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့လူမျိုးစုထဲမှာလူမှုရေးကိုထူးဆန်းဆန်းကြယ်တဲ့လူမျိုးအသစ်လို့မြင်ပြီးငါတို့မြေထဲကိုလှည့်လည်သွားလာနေတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကမတူကြဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပူးပေါင်းလုပ်ခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း၊ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်မျှဝေခြင်းဆုကျေးဇူးများကိုယူလာသည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာအမဲလိုက်နေကြတုန်းပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်တာကိုသာယူပြီးမီးဝန်းကျင်တွင်ပုံပြင်များကိုမျှဝေသည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်သမားများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်ကိုမည်သို့ချဉ်းကပ်သည်ကိုသိမ်မွေ့သော်လည်းသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ၊ မက်ထရစ်များ (သို့) စျေးကွက်သမားဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရပ်ကိုရပ်တန့်ရန်မဆိုလိုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုကြီးသောလူမျိုးစုနှင့်အတူလိုက်ရှာခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအလွန်ကွဲပြားသောရှုထောင့်မှအသိပေးသည်။
ဒီတော့ဒီမှာ၊ စျေးကွက်သမားတွေကဒီအဖြစ်မှန်အသစ်မှာအလုပ်လုပ်နေကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကရှေးဟောင်းကမ္ဘာမှာရှိနေသလိုမျိုးတစ်ခါတလေပြုမူလေ့ရှိတယ်။ စျေးကွက်ထဲမှမည်သည့်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သနည်း Hunger Games? အခုတော့ panel ကနေမေးခွန်း, ငါ့မသိသောအနာဂတ်လူမှုရေးလောကနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဘယ်လိုငါ့အကြံပြုချက်များကိုပြန်ပါ။ ကျွန်တော့်ဝါကျတစ်ခုကတုန့်ပြန်ချက်ကတော့
နည်းပညာအကြောင်းကို obsessive ကိုရပ်တန့်!
အင်တာနက်သည်မူလကပင်လူမှုရေးဖြစ်သည်။ သို့သော်သတင်းအချက်အလက်များသည်ရုပ်သံလိုင်းတိုင်းကိုပြည့်နှက်စေသဖြင့်အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။ နည်းပညာပြတ်တောက်မှုဖြစ်စေသောအနာဂတ်လူမှုရေးရောင်းချသူများက၎င်းကိုသဘာဝအလျောက်တုံ့ပြန်ကြလိမ့်မည် ဘယ်လောက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မလဲ အသစ်သောလူမျိုးစုစျေးကွက်များကအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လူမှုရေးနည်းပညာများ၏အနာဂတ်ကိုခန့်မှန်းရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းနားလည်ကြသည်။ ၎င်းတို့အစားနည်းပညာအပြောင်းအလဲများမည်သို့ပင်ဖြစ်စေလေးစားလိုက်နာမည့်အပြုအမူများကိုဆက်လက်အာရုံစိုက်သင့်သည်။
Tags: 360iဈေးဆက်သွယ်မှုများ 2012David Berkowitzမင်္ဂလာပါဆက်သွယ်မှုအတိအကျစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အနာဂတ်လူမှုရေး၏အနာဂတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အနာဂတ်jeffrey rohresမာဂရက် Francisအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆက်စပ်မှုSam deckerstephen tarleton
22:2012 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 34